जोखिमपूर्ण शासन पद्धति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ११, २०७४ मेखराज परियार
टुुटफुट, उग्र क्रान्तिकारी जार्गन, भ्रम, ढाेंँग, पथभ्रष्टता, दरबारगमन, जडसूत्रवाद जस्ता विडम्बनालाई झेल्दै आजको युगसम्म आउन सफल देशकै प्रमुख दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन बनाएका छन् । सुखद कुरा त यो हो कि आगामी चुनावलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरी एउटै पार्टी निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसले राजनीतिमा मूलत: दुई प्रकारको असर पर्ने देखिन्छ ।
पहिलो, यसले शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्नेछ । अन्य लोकतन्त्रवादी पार्टीलाई पनि धु्रवीकरणमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नेछ । यसकारण धेरै पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुनगई दुई पार्टीको मात्रै उपस्थिति बन्न जाने देखिन्छ । दोस्रो, ठूला शक्तिशाली पार्टी निर्माण भई बहमुत ल्याउने सम्भावना रहन्छ । यसले ५ वर्षका निम्ति एकमना स्थायी सरकारको निर्माण गर्न टेवा पुग्छ । स्थायित्व विना समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक धारको पार्टी रहने र कम्युनिस्ट नेतृत्वमा अर्को प्रगतिशील पार्टी निर्माण हुने दिशातर्फ राजनीति अघि बढ्दैछ ।
यद्यपि स्वार्थ, दबाब, प्रभाव र सत्ताको खेलमा डुब्नपुगेका पार्टीको नेतृत्वबीच यति सरल ढंगको समाधान निस्केला भनी ठोकुवा गर्न भने असम्भव छ । सैद्धान्तिक रूपमा नै पनि माअ‍ोवादीको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसको कारणले १७ हजार जनताको सहादतलाई एमाले र केपी ओलीले जायज ठानी मान्यता दिन तयार छन् ? आजसम्म त कहीं कतै स्वीकारेको छैन । एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई माओवादीले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्छ ? जनयुद्धको महानायक आफूलाई ठान्ने प्रचण्ड के अब मदन भण्डारीलाई देउता मान्न तयार भएका हुन् ? यी सवालमा विशेषत: एमाले र माआवादी केन्द्र प्रस्ट नहुँदासम्म एउटै पार्टी बनिहाल्ने या बनिहाले पनि दीर्घकालीन होला भन्ने विश्वास गर्ने आधार भेटिंँदैन ।
अब वाम एकता, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, कम्युनिस्ट केन्द्र जेसुकै निर्माण गर्ने भनिए तापनि त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मान्ने पार्टी नै बन्ने हो । हामी अब लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र समाजवादी आर्थिक नीतिभन्दा टाढा जान सक्तैनौं । त्यसकारण एमाले, माओवादी केन्द्रमात्रै होइन, अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत शास्त्रीय र जडसूत्रवादी भ्रमहरू त्याग्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।
नीति र व्यवहार बीचको भ्रम
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै सशस्त्र क्रान्तिमार्फत नयाँ शासनको परिकल्पना गरिएको थियो । क्रान्तिकारी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, विद्रोहमार्फत सामन्तवादको अन्त्य गर्ने, पुरानो राज्यसत्ता व्रिदोहमार्फत समाप्त गरी जनवादी राज्यसत्ता निर्मण गर्ने, संसदीय व्यवस्था र साम्राज्यवादी सत्ताको बलपूर्वक अन्त्य गर्ने घोषणा धेरैपटक गरिएकै हो । नेकपा (माले) नेतृत्वमा झापा विद्रोहदेखि नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्ध पनि भयो । नेताहरुले माक्र्स, लेनिन, माओ आदिका कठोर दस्तावेज पढ्न लगाउने र उग्र कुरा गर्न प्रशिक्षित गर्ने कार्य स्थापनादेखि नै गरिएका हुन् । क्रान्तिमार्फत राज्यसत्ता स्थापना गर्ने प्रशिक्षण प्राप्त गरेका नेता, कार्यकर्तालाई वास्तविकता स्वीकार गर्न सहज भएन । शिक्षादीक्षा एकातिर, व्यवहार बेग्लै हुनपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा क्रमिक फुट देखापरे । अहिलेसम्म पनि नेतृत्वले विश्व परिवेशमा आएको बद्लाव, कम्युनिस्ट पार्टीको परिवर्तित भूमिकाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नसकेको छैन । पार्टीको नेतृत्वमा दुई प्रकारको संकट परेको बुझ्न कठिन छैन ।
एक, क्रान्तिकारी, जुझारु, प्रशिक्षित, जोशिला युवा कार्यकर्ताको मनोबल मर्न नदिन आन्तरिक प्रशिक्षण र भनाइमा क्रान्तिकारी कुरा बोल्नैपर्ने बाध्यता छ । अब बन्दुक होइन, भोट, जनताको मन जितेर शासन गर्ने हो । क्रान्ति, विद्रोहको अब जरुरी छैन भनी स्पष्ट पार्न नेतृत्व डराउँछ । यदि यस्तो भनियो भने अन्य पार्टीमा कार्यकर्ता जालान् भन्ने डर र भ्रम छ । दुई, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, अन्य लोकतन्त्रवादी पार्टी, व्यक्ति र दक्षिणको छिमेकीलाई भने ‘हामी पूण लोकतन्त्रवादी’ भैसक्यौं भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी एमालेलाई समेत यस्तो समस्या छ भने माओवादीको त अझै कति अप्ठ्यारो होला । माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आउँदैदेखि क्रमिक फुटको सिकार हुनपुग्नाको विभिन्न कारणमध्ये यो क्रान्ति कि शान्ति भन्ने वैचारिक भ्रम प्रमुख कारण हो । शान्तिको कुरा गर्दा त्यो संशोधनवाद र संसदीय भासमा फँस्यो भनी आलोचना गर्ने र आफू सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी दरिन पार्टी फुटाउने र अर्को पार्टी निर्माण गर्ने व्यवसाय फस्टायो ।
जति नै माओ, कार्लमाक्र्स, लेनिनका क्रान्तिगाथा रटे पनि देतल्लो वर्गको निम्ति कुनै सुधार देखिएको छैन । थुप्रै पटक कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भए । तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या हल भएन । कम्युनिस्टका शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरिबको छोरा/छोरीले नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नसकेको उदाहरण छैन । सरकारी अस्पतालमा दिसा–पिसाब गरेबापत ५/१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । १०० देखि ३०० रुपैयाँको टिकट नकाटी सरकारी अस्पतालमा डाक्टरले बिरामी जाँच्दैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, बसोबास, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक, वर्गीय विभेदको अन्त्यनिम्ति क्रान्तिकारी पार्टी नेतृत्वको सरकारले कुनै असर पार्न नसक्नु विडम्बना हो । एउटा भनाइ छ, ‘जो बोलीमा नै मख्ख छ, उसलाई अधिकार दिनै पर्दैन ।’ विचार र सिद्धान्त शास्त्रीय जडता, जनवाद र साम्यवादको सपना बेच्ने व्यवसाय अब बन्द गर्न जरुरी छ ।
फुटेका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकीकृत गर्ने, स्थायी शक्ति निर्माण गर्ने कार्य सही छ । धेरै दल बनाउँदा जनमत खेर जाने, सरकार अस्थिर हुने समस्या आउँछ । प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी पार्टीले विगतका कमी–कमजोरी, सम्पत्ति, सत्तास्वार्थ, नातावाद, जातिवाद, त्याग्न सक्नुपर्छ । एकल जातीयवादी पार्टी एमाले नेतृत्वले अहम्, घमन्ड त्याग्न र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
माओवादी केन्द्र क्रान्ति र परिवर्तनको मूलधार हो । मूलधार नै सुक्नेगरी एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु, राजनीतिक ‘बेधर्मी’ बन्ने खतरा रहन्छ । पार्टीको नाममा माओवादी झुन्डाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर लोकतान्त्रिक संघीय गणन्त्र, समानता र समावेशीकरण माओवादी विद्रोहले स्थापित गरेका विशिष्ट मुद्दा हुन् । त्यसको हत्या गरी सत्तास्वार्थ या एकतामा लाग्नु हुँदैन ।
अझै सामन्तवादका अवशेष असरल्लै छन् । तिनको विरुद्ध जुझारु ढंगले लड्नु कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख दायित्व हो । विद्यमान जातीय भेदभाव, छुवाछूत, असमानता, अन्याय, महिला हिंसा, विभेद, गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनका समस्या, कुरीति, कुसंस्कारको अन्त्य प्रमुख कार्यभार हुन् । यी सामन्ती व्यवहार र परम्परा नै प्रगतिशील शक्तिका प्रधान शत्रु हुन् ।